सुलोचनाव्दारा लिखित “नारी” पुस्तक बुझाउन पूर्णतारा मिसलाई भेट्दा उनीले मसंग 'एकदमै जरुरी कुरा छ भेटेर कुरा गर्नु पर्छ' भनेर जोड गरिन् । मैले मेरैमा आउनुस छोरासंग भनेर बिदा भएँ । केहि दिन पछि वहाँ घरमा एकलै टुकुटुकु आउनु भयो । हामी आपसमा कति खुशी भयौं भयौं ।
कुराकानी विच उनले, "हिजो आज फारम भर्दा जहाँ पनि आमा र बज्यैको नाम लेख्नु पर्छ हगि?" भनी सोध्नु भयो । उनले थपिन् "धेरै राम्रो भयो । केटाकेटी जन्माउन, हुर्काउन आमा र बाबुको उत्तिकै भुमिका हुन्छ नि हैन ? आमाको नाम भने कहिँ नहुँदा आमाले गरेको योगदान बारे त त्यसै हराएर जान्छ ।" मैले उनको कुरामा समर्थन जनाई रहेँ । उनले फेरि थपिन् "हैन आमाको नामबाट नागरिकता लिन मिल्छ भनेको हो त पूर्ण शोभा?" मलाई सवै कुराको जानकारी नभए पनि आफूले जे जानेको हो त्यहि कुरा मात्र भनें । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा समस्या परेका व्यक्तिहरुको हकमा नागरिकता दिने गरेकोछ । तर नागरिकता विधेयक संसदमा पास भैसकेको छैन । उनले भनिन् "पूर्णशोभा मसंग बाउन्न सालदेखिको कसैलाई पनि नभनेको एउटा घटना छ । आज म तपाईंलाई मात्र भनिरहेकीछु । बाउन्न सालमा मेरो श्रीमान वितिसकेको थियो । जेठो छोरा र अरु छोरीहरुले नागरिकता लिईसकेका थिए । कान्छी छोरीको नागरिकता लिन म र कान्छी छोरी फारम भरेर सिडिओ कार्यालयमा पुग्यौं । हामी कार्यालयमा पुग्दा हाकिम उत्तरतिर फर्केर मेचमा बसका थिए, पूर्वतिर सेतो कमिज सुरुवाल लगाउने कर्मचारी थिए, एउटा साईडमा फूलबुट्टे साडी लगाउने एक जना महिला दुईवटा बच्चाहरु लिएर हाकिमसंग कुरा गरिरहेकी थिईन्, पश्चिमतिरको भित्तामा नेवारहरुको चाड पञ्चदानमा राजा विरेन्द्रलाई स्वागत गरिरहेको फोटो राखेको क्यालेन्डर झुण्ड्याइएको थियो । कार्यालयमा एकछिन कुर्दा मैले ती सवै हेर्न भ्याएँ । मैले हाकिमलाई फारम दिने वित्तिकै मेचमा बसेको हाकिमले यो नागरिकता दिनलाई त टोलमा सर्जिमिन आउनु पर्दछ र कसरी जन्माए थाहा पाउनु पर्दछ भने । मलाई निकै रीस उठ्यो र ठूलो स्वरले बेस्सरी हप्काएँ । हाकिमको टाउको निकै बेर निहुरियो । संगैको अर्को सेतो कमिज सुरुवाल लगाउने कर्मचारीले त्यसरी भन्नु नहुने भनेर सम्झाउन खोजे । मैले यो मेचमा बसेर जथाभावी बोल्न मिल्छ? भनेर उसलाई पनि हप्काएँ र ल यो नागरिकता दिनु पर्दैन भनेर मैले दिएको फाईलहरु तान्न खोजें । अर्को कर्मचारीले त्यो लग्न मिल्दैन भनेर कागजहरु आफूतिर तानें । मैले तैंले नागरिकता दिए देउ नदिए नदेउ भनेर झोकिंदै हामी फक्र्यौं । हामी फर्कंदा सम्म पनि त्यो हाकिमको शीर निहुरेको निहुरियै थियो । शायद मैले पनि उनको आमा कै नाम लिएर गाली गरेकोले हुन सक्छ । अहिले नागरिकता आमाको नाममा पनि लिन मिल्छ भनेर सुनेकीछु । शायद त्यो हाकिमले पनि नागरिकताको बिषयमा कहिँ न कहिँ कुरा उठाए होला, टाउको निहुरेको हिसावले । नानी, यो कुरा कहिँ कहिँ कुनै हिसाबले लेखि दिनुस है मिल्छ भने । नागरिकता लिन कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै हिसाबले महिलाहरुले आवाज उठाईरहेकै थिए र यो कुरा अहिले चर्चामा आईरहेकोछ ।"
पूर्णतारा मिसको उमेर ८२ बर्ष भैसकेको रहेछ । तर रिंगरोडको कहालीलाग्दो गरी हुईँकिने गाडीहरुको बिच बाटो काटिन् र मेरो घर पुगिन् । कुरा गर्दा फुर्ति उस्तै । आँखा, कान, दाँतमा कमि देखिन मैले । मैले गरेको प्रशंसामा उनले थपिन्, "धेरै पढ्दा आँखा पोल्ने गरेको छ अहिले । धेरै पढ्न सक्दिन पहिले जस्तै ।"
मैले सम्पूर्ण आकाशमा छापिएको जेल जीवनको एक हिस्सा पढेर सुनाएँ, जसमा उनको संघर्षका कथाका केहि हरफ पनि थियो । एउटा किताव हस्तान्तरण गरें र फोटो पनि खिचें । जाने बेलामा मैले पुर्याईदिन सोधेँ । "ए त्यहाँसम्म पनि …पर्दैन" भनेर उनी फूर्तिसाथ हिडिन् । फेरि पनि नमस्कार पूर्णतारा मिसलाई ।